Location: musha » Kutumira » ushanyi » Kudzora kwakazara kwekufamba kwenyika kunotarisirwa panosvika 2025
Kusimuka kwenyika kuchasvika 68% yepre-COVID-19 mazinga pasi rose muna 2022 uye anotarisirwa kuvandudza kusvika pa82% muna 2023 uye 97% muna 2024, vasati vapora zvizere muna 2025 pa101% yemazinga a2019, paine fungidziro. 1.5 bhiriyoni kubva kune dzimwe nyika.
Nekudaro, nzira yekupora mukusimuka kwepasirese haina mutsara mumatunhu kana nyika.
Kufamba kwepasirese kubva kuNorth America kwakaratidza kuvandudzwa muna 2021 sezvo kusimuka kwenyika kwakakura ne15% gore negore. The USA yakasimuka kuti ive musika mukuru wepasi rose wekufamba muna 2021. Muna 2022, kubuda kwekunze kubva kuNorth America kunofungidzirwa kusvika 69% ye2019 mazinga, asati aita kupora kuzere ne2024, pa102% ye2019 mazinga, pamberi pemamwe matunhu.
Kubva kune dzimwe nyika kubva kunyika dzeEurope kunotarisirwa kusvika 69% yehuwandu hwe2019 muna 2022. Sezvo chivimbo chekufamba chichivakazve, misika ye-intra-European inotarisirwa kubatsirwa, inotungamirirwa nezvido zvekufamba kwenguva pfupi.
Nekudaro, kudzoreredza kwekufamba kunofanirwa kurwisana nekukwira kwemitengo, kukwira kwemitengo yekurarama, uye hondo muUkraine. Pakazosvika 2025, kusimuka kwenyika kunofungidzirwa kuve 98% ye2019 mazinga. Nenzvimbo, hondo haina kupararira kupfuura miganhu yeUkraine. Nekudaro, Russia yaive yechishanu pamusika mukuru wekufamba mumusika muna 2019, ukuwo Ukraine yaive yechigumi nembiri. Kuenda kumberi, kufamba kushoma kwekunze kubva kunyika idzi kunotadzisa kudzoreredza kwekushanya kweEurope.
Asia-Pacific inotarisirwa kunonoka maererano nekupora. Kusimuka kwekubva mudunhu kunozongosvika makumi matanhatu nenomwe muzana e67 mazinga muna 2019, nekuda kwekunonoka kubviswa kwezvirambidzo zvekufamba, uye hunhu hwekuvandudzwa kwezvirambidzo zvepamba panguva yekubuda kweCCIDID-2022. Kamwe dunhu uye musika mukuru wepasirese wekufamba, China haisi kuratidza chero zviratidzo zvekunyevenutsa nhanho dzayo dzakasimba dzemuganho munguva pfupi. Muna 2021, kubva kune dzimwe nyika kubva kuChina kwaingova 2% yemazinga a2019.
Nepo mafambiro epasirese epasirese akagadzirirwa kuti adzoke kune pre-denda mazinga panosvika 2025, kushanya kwekushanya kunogona kutaridzika zvakasiyana. Kubva pamakore maviri ekufamba kwakaganhurirwa, machinjiro mazhinji enguva refu uye mafambiro enguva pfupi akabuda. Vatengi vava kuda kutsvaga zviitiko zvechokwadi, vanoda zvekufambisa zvemunhu, kusanganisa bhizinesi uye rwendo rwekuzorora, uye kuziva zvakanyanya kukanganisa kwavo kwezvakatipoteredza.
Pachine rwendo rurefu rwekuenda kuti usvike pane zvakajairika. Nekudaro, kugona kudzoreredza kuzere muna 2025 munguva pfupi yapfuura kunopa chikonzero chakanaka chekuti indasitiri yekufambisa uye yekushanya ive netarisiro yeramangwana.
kupora kwekufamba kwepasirese ndege dzenyika
Chitima chinotakura vanhu chakarwiswa muNigeria
Mwedzi Mishanu Yekufamba kweOcean: Mutambi weItaly Kusvika...
Mitsva yemuyedzo yevarwere vane...
Wese munhu ane tarisiro nezvekufamba paATM Dubai
3,000 zvimwe zvigaro zvinotarisirwa kubva kuSouth Korea mu...
Kuwedzerwa kwe REAL ID Act yakakurudzirwa nekuda kwedenda
Hotel Arts Barcelona Inosuma Iyo Penthouses
Southwest Airlines Inotangisa Wanna Get Away Plus
UNWTO ichaita musangano wechimbichimbi wekumiswa basa ...
Kurapwa kutsva muUS kwevakuru vari kurarama nekushaya hope